United Play Ground – Thet Nandar
Posted on November 6, 2009 by Thet Nandar
4 thoughts on “United Play Ground”
မမဘလော့ခ်ကနေ ရန်ကုန်က ဆိုင်သစ်တွေ၊ ကလေးကစားကွင်းတွေ၊ shopping mall တွေ အကြောင်းဖတ်ရတာ ရန်ကုန်နဲ့သိပ်အဆက်အသွယ်မပြတ်သလို ခံစားရတယ်.. နို့မို့ဆို ဘာဆိုင်တွေ ဖွင့်နေလဲ ဘာတွေ ပြောင်းလဲနေပြီလဲဆိုတာ မသိရဘူး.. 🙂
သားသားက ပုံရောင်စုံခြယ်နေတာ စိတ်ဝင်တစားနဲ့.. 🙂
ကလေး ၂ယောက်နဲ့ အတူ သွားလို့ ရတဲ့ နေရာတွေပဲ ရောက်ဖြစ်နေတာပါ။
ဒီက shopping mall တွေကျတော့လည်း ယိုးဒယားပစ္စည်းတွေဆိုတော့ ဈေးလည်း မဆိုးဘူး။
ကစားကွင်းကျတော့လည်း ၀င်ကြေးက ၅၀၀ ကျပ် ၁၀၀၀ ကျပ်၊ coin ဆို တစ်စေ့ကို ၁၀၀ ကျပ် ဆော့လို့ ကောင်းတယ်။
သားက အခု အရွှယ်မှာ ပုံဆွဲတာတို့၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ကတာ တော်တော် စိတ်ဝင်စားနေတယ်။
Handsome boy Henry! Sweetie Angle!
စည်ဘီယာလေး လည်း သောက်အုံးမလား …..
ပီဆာလေးလည်း စားသွားပါအုံး ….
သားသားဖျော်ပေးတဲ့ ကော်ဖီလေးပါ သောက်သွားပါအုံး …..
PreviousGo and play to United Play Ground